SA u19s zihamba phambili ngo 1-0 kukhupiswano lwe Youth ODI
CHESTER-LE-STREET, ENGLAND - JULY 23: Ollie Robinson of England (L)walks after being dismissed for 54 during the 1st ODI between England U19 and South Africa U19 at Emirates Riverside on July 23, 2018 in Chester-le-Street, England. (Photo by Ian Horrocks/Getty Images)
Imitsi engamashumi amahlanu azenawo uJonathan Bird nothinti abane abacholwe ngu Thando Ntini kumdlalo wokuqala iqinisekise impumelelo yeqela labo iCoca Cola South Africa u19s ngemitsi engamashumi asixhenxe anethoba kumdlalo phakathi kwabo namaNgesi eDurham ngomvulo kwaye bahamba phambili ngo 1-0 kolu khupiswano lwemidlalo emithathu.
uBird ukhawuleze wabeka imitsi engu 47 kwibhola nje ezingamashumi amahlanu ananye kwelakhe icala uNtini wabuya namanani 4/19 kwiover zakhe ezisibhozo bebeka iqela labo kwindawo ephucukileyo.
iSouth Africa igqibe ku 229/9 kwi over zabo ezibekiweyo emva kokuphulukana ne toss becelwa baqhokre k’qala. Bird uyewalithatha elithuba wanguye ulawula imicimbi kwindibaniso yakhe no Thamsanqa Khumalo yemitsi engamashumi amahlanu anesine emva kophulukana nothinti wokuqala ka Joshua Richards(5) ekhutshwa ngu Jack Plom (1/43) kwi over yesine.
Baqhubekekile abatyeleli nangona bekusiwa othinti ka Bird no Khumalo(16) naye umkhokheli uWandile Makwetu (39) ufikile enkundleni wongeza ukanti naye uSinethemba Qeshile(32) uyewanogalelo. Curtis Campher uyewonyusa isantya kwelakhe icala ngemitsi ekhawulezileyo wayokugqiba engaphumanga ku 43 kwibhola ezingamashumi amahlanu anesihlanu emva komonakalo ozeno Jordan Cook (4/30) ekhupha uJason Niemand no Jade de Klerk kwi over enye.
Campher kuye kwanyanzeleka asebenzisane nalamdoda asemsileni bazame ukudibanisa, ngethamsanqa bamncedisile ukongeza u63 wemitsi apho bebexingile ku 166/7 emva kwe over ezingamashumi amathathu anesixhenxe. uNtini uze neshumi elinesibini yena uKgaudise Molefe wongeze isibhozo.
Baphinde baqala kakuhle xa kujulwa balifaka phantsi komnyango iqela lamangesi ku 3/6 emva kwe over ezintathu kuqaliwe. uNtini uzenothinti wokuqala kwalandela uMolefe(2/29) nabakhe ababini othinti kwi over enye bekhupha uBen Charlsworth, Harrison Ward no Jack Haynes.
uMkhokheli wabo uTom Banton(9) ukhutshwe ngu Campher (1/37) xa kuqala iover yeshumi elinanye, kwanyanzeleka indoda engena kwindawo yesihlanu uOliver Robinson alungise imeko. Bakwazile ukumncedisa abashiyekileyo kodwa u54 wemitsi azenawo khange uncediswe ngokupheleleyo ngoba bekusiwa othinti kwelinye icala.
uNtini no Jade De Klerk bakhawuleze bawusonga umsila wamaNgesi bebakhupha bonke ngo 150 wemitsi kusashiyeke ishumi lonke le over. Luke Hollman khange aphume yena, ugqibe namanani 30 off 37 iibhola.
Umdlalo wesibini ungolwesine umhla we26 kuJuly eNewcastle.
Wandile Makwetu (captain, Northerns), Jonathan Bird (Western Province), Curtis Campher (Northerns), Archille Cloete (Boland), Jade de Klerk (Eastern Province), Jean du Plessis (South Western Districts), Mondli Khumalo (KZN Inland), Thamsanqa Khumalo (KwaZulu-Natal Dolphins), Kgaudise Molefe (Gauteng), Jason Niemand (Border), Thando Ntini (Western Province), Gideon Peters (Northerns), Sinethemba Qeshile (Border), Joshua Richards (Gauteng), Louis van Schalkwyk (North West).
Thursday, 26 July 2018 – 2nd Youth ODI (South Northumberland CC)
Sunday, 29 July 2018 – 3rd Youth ODI (Scarborough)
England u19s ziliphumelele ukhuphiswano lwe Youth Test.